Naya Post Nepal | ओलीलाई माधवले भने – राजनीतिबाट सन्यास लिनूस्, अयोध्या गएर रामनाम जप्नुस !
ओलीलाई माधवले भने – राजनीतिबाट सन्यास लिनूस्, अयोध्या गएर रामनाम जप्नुस !
काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माध वकुमार नेपालले अब केपी ओलीको नामसमेत लिन मन नला गेको बताएका छन्।
जनकपुरमा बिहीबार ए’कीकृत समाजवादी मधेश प्रदेशको वि स्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
नेपालले अब ओलीले राजनीतिबाट सन्यास लिएर रामनाम ज पेर अयोध्यामा गएर बास बसे हुने टि’प्पणी समेत गरे।
‘एमाले बनाउने नेता पनि हामी हौं। उनलाई पनि नेता बनाउने हामी हौं। ओली त हामीले बनाएको पार्टी क’ब्जा गर्न पो आए का हुन् त’ नेता नेपालले भने, ‘केपी ओलीको कति नाम लिने, अब त उनको नाम लिन पनि मन लाग्दैन।
अब केपी ओली रामदानी ओढेर अयोध्यामा गएर बास बसे हु न्छ। माला जपे हुन्छ। उनले नेपालमा इतिहासमा ६ महिनामै कुनै पनि नयाँ पार्टी देशव्यापी नबनेको तर्क गर्दै एकीकृत समा जवादी मात्र त्यस्तो पार्टी बन्न सकेकोमा गर्व गर्न नेता
कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। देशभरमा एकीकृत समाजवादी पा र्टीको लहर चलेकाले अगामी चुनावमा ठूलो स्थान हासिल गर्ने उनको दा’वी छ। उनले अगामी चु’नाव’का लागि माओवादी के न्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र कांग्रेसको पनि एक खेमा
सकारात्मक रहेकाले गठबन्धन बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको पक्षमा रहेको नेता नेपालको दावी छ।
चुनावको लागि स्थानीय स्तरसम्म होमिन र जनताको घरघरमा जान नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन समेत दिए। -दैनिक न्युज नेपालमा समाचार छ ।
यो पनि ,,यो पनि ,,काठमाडौँ । कहिले सोच्नु भाको छ बिदेश मा बस्ने सपनाले मान्छेलाई के सम्म बनाउन सक्छ भनेर हो आजको घ’ट’ना त्यस्तै रहेको छ | अस्ट्रेलियामा सँगै बसेका पुरुष र महिला काठमाडौँमा आए । साथीभाइ बोलाएर सामान्य ‘गेट टुगेदर’ गरे ।
अनि, बेहुला बेहुली जस्तै माला लगाएर फोटो खिचाए । त्यही फोटोका आधारमा एउटा जोडी अहिले ललितपुर प्रहरीमा बहु विवाहको मुद्दा खेपिरहेका छन् । मु’द्दा खेप्ने जोडी हुन, दिलब हादुर पुन र ममता खड्गी । रुपन्देही घर भएका दिल बहादुर पुन एक समय नेपाल पुलिस क्लबको पौडी पोखरीमा लाइफ गार्ड थिए ।
४१ वर्षका दिलबहादुरको पत्नीसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन । उनी अष्ट्रेलिया गए । करिब १० वर्ष अस्ट्रेलियामा बस्दा उनले आफ्ना छोराछोरीलाई खर्च पठाउँथे । श्रीमती माइत बस्थिन्, उनीसँग कुरा हुँदैन थियो ।
२०७८ चैत्र ११, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 473 Views